[16 / 10 / 2019] Maninona no tokony hamokatra ny vokatra vita an-trano sy marika nasionaly	Ankara 06
[16 / 10 / 2019] BURULAŞ 5 hanao asa fanarenana mpiasa maharitra	16 Bursa
HomeANKAPOBENYAndroany amin'ny tantara: 4 Oktobra 1872 Ny lalamby Haydarpasa-Izmit
Androany amin'ny tantara: 4 Oktobra 1872 Ny lalamby Haydarpasa-Izmit
04 / 10 / 2019 Levent Elmastaş ANKAPOBENY, TORKIA, Androany teo amin'ny tantara 0
Ny 4 Oktobra 1860 Constanta-Chernova (Boğazköy) dia nekena. Nanomboka ny lalana. (64,4 km.)
4 Oktobra 1872 Haydarpasa-Tuzla, ampahany voalohany amin'ny lalamby Haydarpasa-Izmit, dia vita tao anatin'ny volana 14 ary nisokatra ho an'ny serivisy.
4 Oktobra 1888 Deutsche Bank, tarihin'i Georgevon Siemens, dia nahazo tombontsoa hanitatra sy hizara ny Haydarpaşa-Izmit Line ho Ankara. Ny zo hahazo tombontsoa dia 99 taona ary ny vanim-potoana fanorenana dia 3 taona. Ny Deutsche Bank dia nividy ny tsilala Haydarpaşa-İzmit ho an'ny frantsa 6 tapitrisa. Neken'ny minisitry ny Nafia Pasha Zihni Pasha sy Dr. Alfred Kuala, mpanatanteraka iray ao Stutgard-vvürtembergissche, ny fifanekena fifanekena. Ny datin'ny didy hitsivolana dia ny 30 September 1888.
4 Oktobra 1971 Pehlivanköy-Edirne-Kapıkule dia nosokafana ny lalan'i İstanbul-Edirne tamin'ny 229 km. fifandraisana mivantana amin'i Bolgaria. Ny fanorenana ity tsipika ity dia nanomboka tamin'ny 1968.
Fara tampony 4 2005 Oktobra, Tiorka State lalamby TCDD Fitsipika fanitsiana ny fitiavana tsy azo hozongozonina Home lalàna intsony ny fanatanterahana ny Avo Planning Filankevitra.
Androany tao amin'ny Tantara: 10 September 1870 Nanomboka ny fikarohana momba ny lalamby Haydarpasa-Izmit. 10 / 09 / 2012 10 septambra 1870 Ny fitrandrahana mialoha ny lalamby Haydarpasa-Izmit dia nanomboka.
Androany tao amin'ny Tantara: 10 September 1870 Nanomboka ny fikarohana momba ny lalamby Haydarpasa-Izmit. 10 / 09 / 2015 Androany ao amin'ny Tantara 10 Septambra 1870 Nanomboka ny fikarohana momba ny lalamby Haydarpasa-Izmit.
Androany amin'ny tantara: 10 Septambra 1870 Ny lalamby Haydarpasa-Izmit ... 10 / 09 / 2016 Androany ao amin'ny Tantara 10 Septambra 1870 Nanomboka ny fikarohana momba ny lalamby Haydarpasa-Izmit.
Androany amin'ny tantara: 10 Septambra 1870 Ny lalamby Haydarpasa-Izmit ... 10 / 09 / 2017 Androany ao amin'ny Tantara 10 Septambra 1870 Nanomboka ny fikarohana momba ny lalamby Haydarpasa-Izmit.
Androany amin'ny tantara: 11 Oktobra 1872 Ny ampahefatry ny milina 1 arivo tapitrisa 980 arivo amin'ny lalamby Rumeli ... 11 / 10 / 2012 11 Oktobra 1872 1 tapitrisa 980 arivo amin'ny 1 tapitrisa 230 arivo ny fifamatorana bonus amin'ny lalamby Rumeli dia novidina. Nanomboka ny fanorenana ny tsipika Skopje-Mitrovica sy Tarnova-Yambol.
Fanamarihana amin'ny fangatahana: fanamboarana takelaka ambany eo anelanelan'ny arabe 1 sy 2 ao amin'ny Niğde Station ary Boron Station Area
Oktobra 17 @ 14: 30 - 15: 30
9. Eurasia Rail 2021 Fair tokony hotorina any Konya! .. sonia sonia
400 Ton Asphalt Nizotra ho any Izmit Marina
4 Fifanarahana fanao làlan-dàlana XNUMX atao any Kocaeli
Ireto ny mpamily etoPark
Fihenjanana ho an'ny fiara ao amin'ny Kırkpınar
Minisitra Turhan: manao fepetra amin'ny 'fitaterana maimaimpoana maimaimpoana' izahay.
Avy amin'i Fethi Yaşar mankany Demetevler
Maninona no tokony hamokatra ny vokatra vita an-trano sy marika nasionaly
Oktobra 17 @ 10: 00 - 11: 00
Androany tao amin'ny Tantara: 10 September 1870 Nanomboka ny fikarohana momba ny lalamby Haydarpasa-Izmit.
Androany amin'ny tantara: 10 Septambra 1870 Ny lalamby Haydarpasa-Izmit ...
Androany amin'ny tantara: 11 Oktobra 1872 Ny ampahefatry ny milina 1 arivo tapitrisa 980 arivo amin'ny lalamby Rumeli ...
Androany amin'ny tantara: 11 Oktobra 1872 1 tapitrisa dolara 980 arivo an'arivony amin'ny gara Rumeli ...
Androany amin'ny tantara: lalamby 11 Oktobra 1872 Rava lalamby Rumeli ...
Androany teo amin'ny tantara: 7 Sept 1871 nividy ny lalamby Haydarpasa-Izmir ...
Androany amin'ny tantara: 7 Septambra 1871 Haydarpasa-Izmir lamasinina
Androany amin'ny tantara: 13 Oktobra 2017 OMSAN
News Archive Safidio ny volana Oktobra 2019 (303) September 2019 (555) August 2019 (508) Jolay 2019 (633) June 2019 (504) May 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) Febroary 2019 (483) Janoary 2019 (502) Range 2018 (620) Novambra 2018 (504) Oktobra 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) Jolay 2018 (506) June 2018 (581) May 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) Febroary 2018 (500) Janoary 2018 (557) Range 2017 (509) Novambra 2017 (427) Oktobra 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) Jolay 2017 (479) June 2017 (477) May 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) Febroary 2017 (477) Janoary 2017 (538) Range 2016 (487) Novambra 2016 (631) Oktobra 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) Jolay 2016 (485) June 2016 (661) May 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) Febroary 2016 (855) Janoary 2016 (751) Range 2015 (799) Novambra 2015 (640) Oktobra 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) Jolay 2015 (505) June 2015 (535) May 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) Febroary 2015 (878) Janoary 2015 (1077) Range 2014 (963) Novambra 2014 (826) Oktobra 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) Jolay 2014 (911) June 2014 (735) May 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) Febroary 2014 (720) Janoary 2014 (733) Range 2013 (664) Novambra 2013 (656) Oktobra 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) Jolay 2013 (661) June 2013 (577) May 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) Febroary 2013 (811) Janoary 2013 (906) Range 2012 (911) Novambra 2012 (1168) Oktobra 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) Jolay 2012 (863) June 2012 (591) May 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) Febroary 2012 (546) Janoary 2012 (417) Range 2011 (149) Novambra 2011 (35) Oktobra 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) Jolay 2011 (18) June 2011 (16) May 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) Febroary 2011 (24) Janoary 2011 (13) Range 2010 (335) Novambra 2010 (12) Oktobra 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) Jolay 2010 (9) June 2010 (19) May 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) Febroary 2010 (303) Janoary 2010 (1838) Range 2009 (4) Novambra 2009 (1) Oktobra 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) May 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) Febroary 2009 (4) Janoary 2009 (3) Novambra 2008 (1) Oktobra 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) Jolay 2008 (2) June 2008 (2) May 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) Febroary 2008 (5) Janoary 2008 (2) Range 2007 (2) Oktobra 2007 (2) Jolay 2007 (1) May 2007 (1) April 2007 (1) Febroary 2007 (2) Janoary 2007 (1) Range 2006 (1) Oktobra 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) May 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) Novambra 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) Febroary 2005 (1) Janoary 2005 (1) Range 2004 (1) Oktobra 2004 (3) Jolay 2004 (1) May 2004 (2) Range 2003 (1) Oktobra 2003 (1) May 2003 (1) March 2003 (1) Febroary 2003 (1) Janoary 2003 (1) Range 2002 (1) Oktobra 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) Janoary 2002 (2) Jolay 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) May 2000 (3) March 1999 (1) Oktobra 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) Oktobra 1996 (1) August 1996 (2) May 1995 (1) August 1992 (1) May 1990 (1)
Mahazo mari-pahaizana feno ao amin'ny hetsika amin'ny mpanjifa any Konya
Fampirantiana Sonia Maimaaka Son Last izay notanterahina tao amin'ny Station Alsancak